အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရင်သားကင်ဆာကုသရန် Exemestane ဖို့ Ultimate လမ်းညွှန်
1 ။ Exemestane ကဘာလဲ? ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ?2။ Exemestane ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ,
3 ။ Exemestane အသုံးပြုခြင်း4။ Exemestane သောက်သုံးသော
5 ။ Exemestane ရလဒ်များကို6။ Exemestane ဝက်ဘဝ
7 ။ Exemestane ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ 8 ။ Exemestane အကျိုးကျေးဇူးများကို
9 ။ Exemestane ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း 10 ။ ရောင်းရန် Exemestane
11 ။ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရင်သားကင်ဆာကုသရန် Exemestane
1.Exemestane ကဘာလဲ? ဒါကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သလဲ?
Exemestane (107868-30-4) ဟော်မုန်း-receptor-positive ရင်သားကင်ဆာနဲ့တူရင်သားကင်ဆာ၏တိကျသောအမျိုးအစားများကုသမှုတွင်အသုံးပြုကြောင်းတစ်ခုပါးစပ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးများအားဖြင့်သွေးဆုံးပြီးနောက်အမျိုးသမီးကင်ဆာကုသမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ Exemestane (107868-30-4)ထို့အပြင်လူနာများအတွက်ကင်ဆာ၏ပြန်လာတားဆီးအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အချို့ရင်သားကင်ဆာကင်ဆာကြီးထွားမှုအီစရိုဂျင်ဟော်မုန်းများကနှိုးဆွပေးနေကြသည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးကင်ဆာတိကျတဲ့အမျိုးအစားများကိုခံစားနေရပြီးလူနာသန်းပေါင်းများစွာကူညီပေးခဲ့တယ်, နှင့်ဆရာဝန်သင့်ရဲ့အခွအေနေဆန်းစစ်ပြီးနောက်ဆေးဝါးသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးနို့ကင်ဆာသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်နောက်ပြန်ဆုတ်အတွက်ကူညီပေးသည်ရာ, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအီစရိုဂျင်ဟော်မုန်းရဲ့အဆင့်အတန်းကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
သို့သော်ဤမူးယစ်ဆေးကိုသင်ရင်သားကင်ဆာကိုထိန်းချုပ်ကကူညီသင့်ကြောင်းတို့သည်ကြီးစွာသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း, သူတို့ရဲ့သားမွေးတယ်ဆိုတာအသက်အရွယ်အတွင်းအမျိုးသမီးများကအသုံးပြုခြင်းမှစိတ်ပျက်အားလျော့နေကြသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့အခြေအနေပေါ် မူတည်. goserelin (Zoladex) သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ကဲ့သို့သောအခြားဆေးဝါးများနှင့်အတူသုံးနိုင်တယ်။ ဆရာဝန်၏ဆေးညွှန်းမရှိဘဲမူးယစ်ဆေးအသုံးပြုခြင်းပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ, ဒါကြောင့်သင်ကစတင်သုံးစွဲမတိုင်မီအမြဲဆေးစစ်ဘို့သွားကြဖို့အကြံပြုလိုတယ်င်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်အတွက်ရရှိနိုင် Aromasin ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာနှင့်, သောက်သုံးသောတူညီနေဆဲဖြစ်သည်။ သငျသညျဆေးမှူးတဝယ်ယူထံမှအသုံးပြုမှုဖို့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၌သငျပဲ့ပြင်သင့်ပါတယ်။
သင်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်သင်န်းကျင်ဆိုဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ကုန်သည်များထံမှမူးယစ်ဆေးဝါးကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ သင်အလွယ်တကူသင်သည်အလိုရှိကြသည်တွင်ရလဒ်များမကယ်မနှုတ်နိုင်အတုထုတ်ကုန်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ကတည်းကသို့သော်သင်သည်မည်သည့်ဆေးဝါးဝယ်ယူသည့်အခါသတိထားပါရန်လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့ဘယ်လိုအဘယ်မှာနောက်ပိုင်းတွင်ဤဆောင်းပါးကိုအတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အရည်အသွေး Exemestane ဝယ်ယူရန်ဆှေးနှေးပါမညျ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ဒီမူးယစ်ဆေးသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအီစရိုဂျင်ဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်နှေးကွေးခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာဟော်မုန်းရင်သားကင်ဆာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်, ဒီထက်ထုတ်လုပ်မှုလည်းမရှိသည့်အခါ, ကသင်ရောဂါ၏ကြီးထွားထိန်းချုပ်ထားကြပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်။ သို့သော်ဤမူးယစ်ဆေးရင်သားကင်ဆာကင်ဆာအီစရိုဂျင် receptor အပြုသဘော (ER +) အမျိုးအစားကုသမှုသာထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရင်သားကင်ဆာအနုတ်လက္ခဏာဟော်မုန်းအဲဒီ receptor လျှင်, Exemestane သင်ရောဂါထိန်းချုပ်မကူညီကြလိမ့်မည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘဲနေ့စဉ်ကင်ဆာဒီမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးကုသနိုင်ပါတယ်။
အီစထိုဂျင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးပွါးအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုလိင်ဟော်မုန်းဖြစ်ပြီး, သေးသူတို့၏သွေးဆုံးမှီဖို့အမြိုးသမီးမြားကိုဤမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးထံမှစိတ်ပျက်အားလျော့နေကြတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ သငျသညျဤအမြိုးအစားပိုင်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထို့နောက်သင့်ဆရာဝန်ကိုသင်နောက်တစ်ကြိမ်သားဘွားဖို့စီစဉ်နေမဟုတ်လျှင်သင့်ရဲ့ရင်သားကင်ဆာများအတွက်အခြားဆေးဝါးအကြံပြုရပါလိမ့်မယ်။ အနိမ့်အီစထိုဂျင်သင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်တန်ဖိုးရှိရှိဖြစ်မတတျနိုငျဖြစ်ကြပြီးသင်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးစတင်သုံးစွဲမတိုင်မီထိုကွောငျ့, ကဆေးစစ်ခံယူဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုလိုသည်။ ဤသည်ဆေးဝါးမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ aromatase inhibitors အုပ်စုပိုင်
ဤသည်ရင်သားကင်ဆာ၏တိကျသောအမျိုးအစားများကုသမှုတွင်အသုံးပြုကြောင်းတစ်ခုပါးစပ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ အပြင် Exemestane (107868-30-4) ဆေးပြီးနောက်ပြန်ရောက်လာမယ့်အနေဖြင့်ရင်သားကင်ဆာ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ Exemestane အကြောင်းကို 2-3 နှစ်ပေါင်းနှင့်မဆိုသိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုမရှိဘဲဆေး Tamoxifen အဖြစ်လူသိများနေတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့ကုသမှုခံကြသူရင်သားကင်ဆာလူနာအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဤသည်မူးယစ်ဆေးအများအားဖြင့်သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနောက်တဖန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲရောဂါ၏အခွင့်အလမ်းတွေကို minimize လုပ်ဖို့ခွဲစိတ်ကုသခံယူပြီးနောက်ရင်သားကင်ဆာလူနာအားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ အမှု၌သင်တို့ radiotherapy သို့မဟုတ်ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုခံကြပါပြီ, သင့်ဆေးမှူးတ Exemestane ယူပြီး start ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပေါ်တွင်သင်အကြံပေးပါလိမ့်မယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Exemestane တိကျတဲ့ရင်သားကင်ဆာအမျိုးအစားများများအတွက်ပထမဦးဆုံးအချိန်ကုသမှုအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ရင်သားကင်ဆာ၏အစောပိုင်းအဆင့်မှာ, ဆရာဝန်ခွဲစိတ်ဘို့မလိုအပ်လည်းမရှိသည့်အခါအခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားလျက်နှင့်မထားပါတယ်သည့်အခါဤအမူးယစ်ဆေးသုံးစွဲဖို့သငျသညျအကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမူးယစ်ဆေးကိုလည်းခွဲစိတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလျှက်ရှေ့တော်၌ထိုကြီးမားသောရင်သားကင်ဆာကျုံ့လူနာအားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ဆေးဝါးသင့်ရဲ့ရင်သားကင်ဆာခွအေနအေဆန်းစစ်ပြီးနောက်ဒီမူးယစ်ဆေးကိုယူဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပေါ်တွင်သင်အကြံပေးဖို့အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလည်းအမျိုးသမီးတွေသူတို့ဆေး Tamoxifen ယူပြီးစဉ်တွင်မိမိတို့၏သွေးဆုံးအတွက်ဆိုးရွားလာသည့်ရင်သားကင်ဆာ, ခံစားနေရပြီးကူညီရန်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဟော်မုန်းလိုရင်ပတ်မြင်းသရိုက်အနာရပ်တန့်အတွက်ကူညီပေးသည်ဖြစ်သောအီစရိုဂျင်ဟော်မုန်း၏အဆင့်ဆင့်ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ။ အမျိုးသမီးများ, သူတို့ရဲ့သွေးဆုံးမှာရင်သားကင်ဆာသူတို့ရဲ့အစောပိုင်းအဆင့်အတွက်လည်းသူတို့ကိုရောဂါထိန်းချုပ်ကူညီပေးဖို့ဒီမူးယစ်ဆေးကိုသုံးနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံမူးယစ်ဆေးသွေးဆုံးမှီသေးနေသောအမျိုးသမီးရင်သားကင်ဆာကုသရန်သုံးနိုငျသျောလညျးသငျ Exemestane ယူပြီး start မတိုင်မီအမြဲသင့်ဆရာဝန်ပြောဆိုပါ။
ဒါကတစ်ဦးပါးစပ်မူးယစ်ဆေးသည်နှင့်သင်အစာစားပြီးနောက်တစ်ချိန်ကတစ်နေ့လျှင် 25mg များထဲမှတက်ဘလက်ယူသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါသောက်သုံးသောနှစ်ဦးစလုံးအဆင့်မြင့်နှင့်အစောပိုင်းရင်သားကင်ဆာလူနာတွေအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်အတွက်နေ့ရက်တိုင်းတစ်ချိန်တည်းမှာမူးယစ်ဆေးယူဖို့လည်းအကြံပြုလိုတယ်။ သငျသညျတစျခုလုံးကိုသောက်သုံးသောကာလအတွင်းအပေါငျးတို့သဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဒီထက်သို့မဟုတ်သင့်ဆေးမှူးများကသတ်မှတ်ထားသည့်အရာကိုထက်ပိုမယူပါနှင့်။ အမှု၌သင်တို့မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်သင်သောက်သုံးသောယူပြီး start ရှေ့၌သင်တို့ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိသည်။ သင်၏ဆရာဝန်ကိုသင်နှစ်ပေါင်းများစွာ Exemestane ယူသို့မဟုတ်ပင်ကာလတိုးချဲ့ကြောင်းအကြံပေးပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Exemestane သောက်သုံးသော ကြာချိန်သည်သင်၏ရင်သားကင်ဆာအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးကတည်းကသင့်ဆရာဝန်များကသတ်မှတ်သောကာလအဘို့ကိုယူရပါမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်. ငါးနှစ်မှဆယ်နှစ်ကြားဘို့ကိုယူရပါမည်။ တစ်ခါတလေတချို့လူနာတစ်ဦးနှစ်အနည်းငယ်ဘို့ဆေး Tamoxifen ယူပြီးပြီးနောက် Exemestane သောက်သုံးသောယူပြီးစတင်ပါ။ သင့်ဆရာဝန်ကသင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းများမှပြန်လာသောသို့မဟုတ်ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်ရင်သားကင်ဆာကုသရန်ဒီမူးယစ်ဆေးကိုယူအကြံပြုလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, သငျသညျနေသမျှကာလပတ်လုံးကထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိရောဂါများကိုစောင့်အဖြစ် Exemestane သောက်သုံးသောယူပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကောင်းစွာရရင်တောင်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်၏အသိပညာမရှိဘဲသင်၏သောက်သုံးသောယူပြီးရပ်တန့်ကြပါဘူး။ သငျသညျအနာကိုငြိမ်းစေခံစားရလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကင်ဆာရုံမြုံသွားပြီနှင့်ကောင်းစွာကုသမပေးလျှင်အချိန်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြန်လာနိုင်ပါတယ်။ အမှု၌သင်တို့ကြောင့်အအကြောင်းရင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားတစ်ဦးထိုးလက်လွတ်အောက်ပါနေ့ကသင်၏ဆရာဝန်များကအကြံပြုထားသည်အတိုင်းသင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက် Exemestane ပုရန်သင့်အားယူရန်လုံလောက်ပါလိမ့်မည်ကတည်းကရုံတစျခုစားပွဲပေါ်မှာ ယူ. , လျော်ကြေးပေးဖို့အပိုတက်ဘလက်ယူကြဘူး နောက်နေ့။ သင့်ဆရာဝန်တစ်ဦးသည်အလွန်ရှားပါးသောဖြစ်ရပ်ဖြစ်သောဒါအကြံပြုမဟုတ်လျှင်လုံခြုံဖြစ်ဖို့, သောက်သုံးသောတိုးမြှင့်ဘူး။
Boldenone Undecylenate (Equipoise) Bulking, ဖြတ်တောက်ခြင်း, Cycle, သောက်သုံးသောအသုံးပြု(အသစ်တစ်ခုကို browser tab မှာဖွင့်လှစ်)
ဒါဟာမူးယစ်ဆေးနှစ်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်ပြီးထားပြီး, ထိုသို့မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုသောအခါ, အရည်အသွေးမြင့်သောရလဒ်များကိုသက်သေပြလျက်ရှိသည်။ ယခုနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, Exemestane ပိုပြီးဒါသူတို့ရဲ့သွေးဆုံးမှီဘူးသောသူတို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရင်သားကင်ဆာအချို့အမျိုးအစားများကုသမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, မူးယစ်ဆေးလည်းဆေးပြီးနောက်ပြန်လာရာမှရင်သားကင်ဆာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်အတွက်အစွမ်းထက်ဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ သင်ဤမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးပြီးနောက်ပျော်မွေ့လိမ့်မည်ဟုအဆိုပါသိသာရလဒ်သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရင်သားကင်ဆာ၏တိုးတက်မှုများအတွက်အဓိကဓာတ်ကူပစ္စည်းဖြစ်သော, အအီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ သင့်လျော်စွာအသုံးပြုခဲ့သည့်အခါ Exemestane သည်, အသုံးပြုသူများအပြုသဘောရလာဒ်များတွေ့ရမယ်။
သို့သော်ဆေးပညာထံမှသင့်လျော်သောအကြံပေးအဖွဲ့မပါဘဲ overdosed သို့မဟုတ်အသုံးပြုသောအခါ, ထိုကဲ့သို့သောခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ပင်ဓာတ်အဖြစ်ပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ သင်သောက်သုံးသောနှင့်ပြီးနောက်ဆက်လက်အဖြစ်ဒါကြောင့်ရှေ့တော်၌, ဆေးပညာဆေးဘို့သွားကြဖို့အမြဲမရှိမဖြစ်ပါပဲ။ ကင်ဆာလူနာဆေး၏တိုးတက်မှုနှင့်ခြုံငုံကျန်းမာရေးအခြေအနေစောင့်ကြည့်ဖို့ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများအဘို့အသွားရန်အကြံပြုပါသည်။ အဲဒီမှာပိုကောင်းရလဒ်အတွက် Exemestane အတူသုံးနိုငျသောအခြားဆေးဝါးများလည်းရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင့်ဆရာဝန်အညီသင်အကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်သည်မည်သည့်ဓာတ်အကြောင်းကိုသင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြားနှင့် Exemestane သောက်သုံးသောယူပြီးသောအခါအသင်သည်မည်သည့်ကြိုတင်ဆိုးကျိုးများတွေ့ကြုံခံစားတဲ့အခါမှာသေချာပါစေ။
Exemestane ဝက်ဘဝ 24hrs ရှိပါတယ်, သင်သာတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာ 25mg များထဲမှတက်ဘလက်ယူရန်လိုအပ်သည်အဘယ်ကြောင့်ကြောင်းပါပဲ။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးသင့်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်တက်ကြွစွာဆက်လက်တည်ရှိခြင်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှအနိမ့်သည့်အီစရိုဂျင်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုစောင့်ရှောက်မည်။ သင်သည်သင်၏သောက်သုံးသောယူဖို့မေ့လျော့တော်ရင်တောင်အောက်ပါနေ့ရက်ကိုတစ်ဦးအပိုဆောင်းထိုးမယူကြဘူး။ ပြီးသားသင့်ခန္ဓာကိုယ် system ထဲမှာမူးယစ်ဆေးနောက်နေ့ရန်သင့်အားယူဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အပြည့်အဝဘဝဒီတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ် overdose ပါဘူး, ဒါကြောင့်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင် 48hrs ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်အားဖြင့်အကြံပြုတစ်ဦးထက်ပိုလျှံဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းသောက်သုံးသောယူ, သင်၏ဆရာဝန်ကိုသင်မူးယစ်တာကိုရပ်တန့်ကြောင်းအကြံပြုချိန်တွင်ပင်ပြုလုပ်နေဆဲသင့်ခန္ဓာကိုယ်စနစ်တက်ကြွကြလိမ့်မည်။ ဘယ်တော့မှမ
ကိုယ့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့ Exemestane အများအားဖြင့်သောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်သူတွေကိုအားဖြင့်ကြုံတွေ့ဖြစ်ကြောင်းယင်း၏, အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်။ သငျသညျဆေးစစ်ဘို့မယ်မရှိဘဲဤဆေးပညာယူလျှင်သင်သည်ပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရဆုံးများပါတယ်။ အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဓာတ်မတည် Exemestane ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏မူလတန်းအကြောင်းတရားများဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာ, မူးယစ်ဆေးဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် system သို့မဟုတ်ဓာတ်မတည်၏သင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်ရန်ပျက်ကွက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကဆေးညွှန်းမူးယစ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်သင့်ဆရာဝန်၏ပညာအတတ်မရှိဘဲကယူပြီးသက်ရောက်မှုတိုးဖို့ကဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီမှာနီးပါးအပေါငျးတို့သ Exemestane အသုံးပြုသူများပုံမှန်နေသောအချို့သောဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့သောက်သုံးသော၏ပထမလအနည်းငယ်အကြာတွင်ကွာသွားပါ။ သို့သော်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှည်သို့မဟုတ်ထမ်းများလွန်းပြင်းထန်ဖြစ်လာသောအခါထိုသူတို့ minimize ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှာရန်သင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကအကြောင်းကြား။ ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပါဝင်သည်;
မူးယစ်ဆေးကတည်းကသွေးဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေသင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအီစရိုဂျင်ဟော်မုန်းပမာဏလျှော့ချခြင်းနှင့်ကသင့်ရဲ့ကလေးမွေးအသက်အရွယ်ပြီးနောက်ဒီမူးယစ်ဆေးကိုယူဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်င်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ သင်ဤမူးယစ်ဆေးယူပြီး start ပြီးနောက်ကိုသင်ကလေးများသည်မခံနိုင်ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။
အိပ်မပျော် Exemestane အသုံးပြုသူများသည်ကိုသင်အလုပ်လုပ်နေရကြပြီမဟုတ်ပင်လျှင်, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်အတူတွေ့ကြုံခံစားအခြားဘုံပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့အရိုးသို့မဟုတ်အရိုးပွရောဂါ၏စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်လည်းအချို့ Exemestane အသုံးပြုသူများအတှေ့အကွုံမြားအခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပါသည်။
အခြေအနေကိုပိုဆိုးရရှိသွားတဲ့မတိုင်မီသူတို့ကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားမှု၌, သင်ချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြားသင့်ကြောင်းသည်အခြားပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းရှိပါတယ်။ သို့သော်ဤအဆင့်မြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအများအားဖြင့် Exemestane အသုံးပြုသူအချို့အားဖြင့်ကြုံတွေ့နေကြသည်။ သူတို့ဟာအခြားသူတွေအကြား, အရေပြားနှင့်ဆံပင်အပြောင်းအလဲ, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလက်စထရောအဆင့်ကိုတိုး, အစာစားချင်စိတ်များထိထိရောက်ရောက်မနှင့်အသည်းအပြောင်းအလဲများကိုပါဝင်သည်။ Exemestane ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခါတစ်ရံတွင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်မူးယစ်ဆေးမှဓာတ်ပြုပြီးဘယ်လိုပေါ်မူတည်သည်။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာသည်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တခါတရံတွင်မူးယစ်ဆေးသင်တို့အပေါ်မှာဒါကြောင့်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့မိတျဆှေကကြိုးစားပါတယ်အခါ, ကပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအတွက်ရလဒ်များ။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးတဲ့အခါသင်မျှော်လင့်ထားသင့်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအာဏာပိုင်များဖော်ပြရန်ခဲယဉ်းပါတယ်။
သတငျးကောငျးကိုသငျသညျအခြိနျမှာသင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြားလျှင် Exemestane ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အများစုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သင်တို့ကိုလည်းအရမ်းမူးယစ်ဆေးထုတ်လုပ်သူနှင့်သင့်ဆရာဝန်များကထောက်ပံ့ပေးအပေါငျးတို့သသောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာကြောင်းသေချာစေရန်သင့်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်ပိုကောင်းရလဒ်အတွက်ပုံမှန်ဆေးစစ်ဘို့အသွားကြောင်းအာမခံပါသည်။ သင်သောက်သုံးသောယူပြီး start မီရှိစေခြင်းငှါမဆိုဓာတ်မတည်အကြောင်းကိုသင့်ဆရာဝန်အသိပေးပါ။ မည်သည့်ရောဂါများကိုရှောင်ရှားရန်သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူအားလုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမြှင့်။
Exemestane အကျိုးခံစားခွင့် အများအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရင်သားကင်ဆာအချို့အမျိုးအစားများကိုထိန်းချုပ်ဘို့လူသိများသည်။ ဒါဟာကြီးထွားဖို့ရင်သားကင်ဆာကျိတ်များကလိုအပ်သည့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, မူးယစ်ဆေးကိုသင်အောင်မြင်တဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်ရင်သားကင်ဆာမဆိုအနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တားဆီးကူညီပေးပါမည်။ ဒီ Exemestane အသုံးပြုခြင်း၏အရှိဆုံးလူသိများအကျိုးရှိပေမဲ့, သင်သည်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးတာပျော်မွေ့သောအခြားအကျိုးခံစားခွင့်လည်းရှိပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, ဒီတစ်ဦးပါးစပ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပြီး, ကြောင်းသင်သည်သင်၏ဆေးညွှန်းကိုယူပြီးနေချိန်မှာမဆိုထိုးကြုံတွေ့ရမယ့်ကြသည်မဟုတ်ဆိုလိုသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေး 48 နာရီတစ်ဦးအထင်ကြီးတက်ကြွစွာဘဝရှိပါတယ်, သင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ဖို့မလိုပါတစ်သောက်သုံးသောလက်လွတ်လျှင်, သင်သာနောက်နေ့နောက်နေ့ထိုးယူဖို့လိုပါတယ်, သငျသှားဖို့ကောင်းပါတယ်။ လေ့လာရေးကိုလည်း Exemestane ဓာတ်တိုးခြင်းနှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရောင်ရမ်းပျက်စီးခြင်းကနေခန္ဓာကိုယ်တစ်ရှူးတားဆီးအတွက်အကူအညီပေးနိုင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးဓာတ်တိုးစဉ်အတွင်းခရမ်းလွန်ဓါတ်ရောင်ခြည်များက၎င်းတို့၏ DNA ကိုပျက်စီးမှသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်ကာကွယ်အတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ဟုဆိုသည်။ Exemestane အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Anti-inflammatory အေးဂျင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
အမျိုးမျိုးသောမှာရှာဖွေနေ Exemestane ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, သင်သည်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးတယောက်ကိုတယောက်လူတစ်ဦးအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများလက်ခံရရှိထားပြီးကြောင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးတစ်ခုအထင်ကြီး rating ကြောင့်အများအပြားအသုံးပြုသူများအကြီးအကိုကူညီပေးခဲ့ပွီဆိုလိုတာကအပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကောင်းတစ်ခုအရေအတွက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးအမျိုးသမီးတွေအတွက်ရင်သားကင်ဆာအချို့အမျိုးအစားများကုသမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတွင်ပိုမိုဒီတော့ဆေးပညာလောကရှိမရှိမဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အတော်များများကအသုံးပြုသူများသည်ရင်သားကင်ဆာ၏တိုးတက်မှုနှင့်ပြန့်ပွားဘို့တာဝန်ယူနေသောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအီစရိုဂျင်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု, အသေးအဖွဲအတွက်အစွမ်းထက်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြသည်။
မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုသောအခါ, အရည်အသွေးကိုရလဒ်များကိုကယ်တင်မယ့်ခိုင်မာတဲ့ပါးစပ်မူးယစ်ဆေးသောကြောင့်ထိုသို့ချစ်သောသူသည်အသုံးပြုသူများရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Exemestane အသုံးပြုသူအများစုဆေးရင်သားကင်ဆာကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့သူတို့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်ဘယ်လောက်အားရကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ အခြားသူများကမူးယစ်ဆေးသူတို့ရဲ့ရင်သားကင်ဆာသည်အနာပျောက်စေသောလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားခဲ့သည်ကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်ပြန်လာမယ့်အနေဖြင့်ရောဂါတားဆီး။ ဆရာဝန်နှင့်အမျိုးမျိုးသောသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတွေလည်းဒီရင်သားကင်ဆာမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အစွမ်းသတ္တိကိုသရုပ်ပြပါ။ အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ရင်သားကင်ဆာဝေဒနာရှင်၏ကြီးမားသောရာခိုင်နှုန်း Exemestane အပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ ratings ပေးပြီ။
ထိုနည်းတူစွာပင်အချို့အသုံးပြုသူများကဒီမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံခဲ့ကြပြီမဟုတ်လည်းသူတို့ရဲ့စိတ်ပျက်စရာဖော်ပြနေကြသည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်များအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ပျက်ကွက်ဖို့ပိုဤမျှလောက်များစွာသောထုတ်ကုန်များအတွက်ပုံမှန်ပါပဲ။ သို့သော်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ကြသူ Exemestane အသုံးပြုသူအများစုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်ဆေးမှူးပါဝင်သူတို့ရဲ့ပျက်ကွက်ဖို့က attribute ။ သင်သည်မည်သည့်မူးယစ်ဆေးစတင်သုံးစွဲမတိုင်မီတစ်ဦးကဆေးစစ်အရေးကွီး၏။ ဒါဟာသင်ဤမူးယစ်ဆေးယူပြီးသည့်အခါချက်ချင်းသင်သည်မည်သည့်ပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြုံတွေ့ရမစတင်သင့်ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်ကြောင်းကိုလည်းအကြံပြုလိုတယ်။ သငျသညျကောင်းသောအချိန်အတွက်သင့်ဆရာဝန်အကြောင်းကြားလျှင်နီးပါးအပေါငျးတို့သ Exemestane ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် Exemestane အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရင်သားကင်ဆာ၏ကုသမှုအတွက်အရေးပါသောအခဲ့တဲ့အစွမ်းထက်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးရဲ့အမြင့်ဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်ကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအကြံပြုသောက်သုံးသောကပ်ဖို့နဲ့အမြဲသင်သည်မည်သည့်အဆင့်မြင့်ဆိုးကျိုးများတွေ့ကြုံခံစားမှု၌သင်၏အဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကပါဝင်ပတ်သက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ရုံလူသတ်သမားရောဂါဖြစ်သော, သင်ရင်သားကင်ဆာကိုထိန်းချုပ်ရန်ပျက်ကွက်မယ်ကတည်းကသင့်ဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်မရှိဘဲမူးယစ်ဆေးတာကိုရပ်တန့်မနေပါနဲ့။ တစ်ခါတစ်ရံမူးယစ်ဆေးသင်တို့အဘို့အလုပ်ကိုင်ဖို့ပျက်ကွက်မယ်, ဒါပေမယ့်သင့်ဆရာဝန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်စနစ် friendlier ကြောင်းတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်တကွသင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
10 ။ရောင်းရန် Exemestane
ရောင်းရန် Exemestane မတူညီတဲ့ခုသို့မဟုတ်တိုင်းဒေသကြီးများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်အမည်များကိုအောက်မှာကိုရောင်း, ဤမူးယစ်ဆေးများအတွက်အသုံးအများဆုံးအမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့် Aromasin ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်သင်တစ်ဝှမ်းမည်သည့်ဆေးဆိုင်ကနေအမြောက်အများအတွက် Exemestane ဝယ်ဖို့, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်ကိုမပါဘဲယူပြီး start ပါဘူးသေချာအောင်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကြောင်းသေချာပါစေ Exemestane အမှုန့်ကိုဝယ် ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုများအတွက်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ရောင်းချသူသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူမှ။ မရတိုင်း Exemestane ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း သင်အွန်လိုင်းယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်ရှာပါ။ တချို့ကအနိမ့်ရညျအသှေးသို့မဟုတ်သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ယေဘုယျမူးယစ်ဆေးများပေလိမ့်မည်။ လက်ျာဆုံးဖြတ်ချက်မချ၌သင်တို့ကိုလမ်းပြဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရှာဖွေပါ။
သင့်ဆရာဝန်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရောင်းချသူထံမှအကောင်းဆုံးနှင့်အရည်အသွေးမြင့် Exemestane ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲပေါ်တွင်သင်ပဲ့ပြင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဒေသအတွက်အကောင်းဆုံး Exemestane ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျနော်တို့အချိန်မီပေးပို့ပါစေ။ ယနေ့သင့်ရဲ့အမိန့်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနှင့်သင်ရင်သားကင်ဆာကိုတိုက်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအရည်အသွေးကို Exemestane ရဖို့သေချာပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏အိမ်သူအိမ်သားများနှစ်သိမ့်ကနေအငြိမ့်ကသင်၏အမိန့်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်အဆက်အသွယ်မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျအဘယျသို့အသုံးပြုခြင်း, အပိုင်များနှင့် Exemestane ဝယ်ယူအကြောင်းကိုသင်၏နိုင်ငံအတွင်းပြည်နယ်အတွက်ဥပဒေများကိုနားလည်သေချာပါစေ။ ကျနော်တို့ကဥပဒေကိုလိုက်နာကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါတို့သည်ငါတို့၏အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များတင်သွင်းမှုသို့မဟုတ်ဝယ်ယူဘို့မိမိတို့နေအိမ်တိုင်းပြည်ဥပဒေများနှင့်အတူဒုက္ခ၌အကြှနျုပျတို့၏ဖောက်သည်ထားလိုမဟုတ်ဘူး။ ဥပမာ, အမေရိကနှင့်ကနေဒါ၏ United States မှာ, Exemestane တစ်ဦးဆေးညွှန်းသာမူးယစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့ဆေးညွှန်းများမဟုတ်လျှင်သင်ဆေးဝါးမဝယ်နိုင်ဆိုလိုသည်။ သို့သော်ထိုသို့ဝယ်ယူအပိုင်, သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲဖို့တရားမဝင်ပါဘူး, ဒါပေမယ့် Exemestane ဒီနှစ်နိုင်ငံအနေနဲ့တန်ပြန်ကျော်မူးယစ်ဆေးမဟုတ်ပါဘူး။
11 ။အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရင်သားကင်ဆာကုသရန် Exemestane
Exemestane အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရင်သားကင်ဆာ၏ကုသမှုထဲမှာဆေးပညာဆိုင်ရာကမ်ဘာပျေါတှငျမရှိမဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာသက်သေပြခဲ့သည်တစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးကြီးထွားအဖြစ်သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရင်သားကင်ဆာပျံ့နှံ့များအတွက်တာဝန်ရှိနေသောသင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အီစရိုဂျင်ဟော်မုန်းပမာဏလျှော့ချခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိမိတို့ကလေး-bearing အသက်အရွယ်ဆဲနေသောမင်းသမီးထိခိုကျနိုငျသောကွောငျ့အဆိုပါမူးယစ်ဆေးများအားဖြင့်၎င်းတို့၏သွေးဆုံးမှီကြသူအမျိုးသမီးများကအသုံးပြုသည်။ Exemestane လည်းအောင်မြင်သောကုသမှုခံယူပြီးနောက်ရင်သားကင်ဆာ၏ပြန်လာသို့မဟုတ်ပြန့်ပွားခြင်းမှအသုံးပြုသူများကိုကာကွယ်အတွက်အရေးကြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရင်သားကင်ဆာအခြေအနေပေါ် မူတည်. သင့်ဆရာဝန်ကသင်၏ကင်ဆာက၎င်း၏အစောပိုင်းအဆင့်မှာဖြစ်ပါတယ်လျှင်ကုသမှုအဖြစ်မူးယစ်ဆေးယူရန်သင့်အားအကြံပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်၏ဆေးဝါးကိုလည်းခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူမတိုင်မီခဏသုံးစွဲဖို့ Exemestane သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာသင်အဆင့်မြင့်နှင့်လူနာသည်၎င်း၏အစောပိုင်းအဆင့်ရင်သားကင်ဆာကုသမှုအတွက်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်သောက်သုံးသောဖြစ်သောတစ်နေ့လျှင် 25mgs များထဲမှတက်ဘလက်, ယူကြောင်းအကြံပြုသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလည်းသင့်ဆရာဝန်သင်တို့အဘို့မထိုက်မတန်ခံစားရလိမ့်မည်ဟုမရှိမဖြစ်သည်အခြားဆေးဝါးများနှင့်အတူသုံးနိုင်တယ်။ သင်၏ဆေးဝါးတွေနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘဲ set ကိုသောက်သုံးသောတိုးမြှင့သို့မဟုတ်လျှော့ချဖို့ဘယ်တော့မှသတိရပါ။ မူးယစ်ဆေးအကူအညီနဲ့ဘို့သင့်ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်တာအနေဖြင့်အမှု၌သင်တို့ကိုမဆိုပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရ။ ထိုကဲ့သို့သောခေါင်းကိုက်ခြင်း, မူးဝြေခင်းနှင့်အန်အဖြစ်တချို့ကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသောက်သုံးသောသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးလများတွင်ပုံမှန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ခါတိုင်းထက်ပိုရှည်နေပါလျှင်သင့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းကြား။ သင်သည်လက်ျာခြေလှမ်းများယူနှင့်သောက်သုံးသောညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်အားလုံးနီးပါး Exemestane ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ကာယဗလလေ့ကျင့်ခြင်းအဘို့အ Dihydroboldenone / DHB ဖို့ Ultimate လမ်းညွှန်(အသစ်တစ်ခုကို browser tab မှာဖွင့်လှစ်)
Goss, PE, Ingle, ဖြစ်မှု, Alés-မာတီနက်စ်၏, je, ချောင်, Am, Chlebowski, RT ကို, Wactawski-Wende, ဂျေ ... & Winquist, အီး (2011) ။ သွေးဆုံးပြီးသားအမျိုးသမီးရင်သားကင်ဆာကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အ Exemestane ။ ဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်, 364(25), 2381-2391 ။
Yardley, DA, Noguchi, အက်စ်, Pritchard, KI, Burris, HA, Baselga, ဂျေ, Gnant, အမ် ... & Melichar, ခ (2013) ။ Everolimus ပေါင်း HR + ရင်သားကင်ဆာနှင့်အတူသွေးဆုံးပြီးသားလူနာများတွင် exemestane: BOLERO-2 နောက်ဆုံးတိုးတက်မှု-အခမဲ့ရှင်သန်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကုထုံးတိုးတက်လာ, 30(10), 870-884 ။
Pagani, O. , ရီဂင်, MM, Walley, BA, Fleming က, gf, Colleoni, အမ်, Lang, ဗြဲ ... & Ciruelos, အီး (2014) ။ premenopausal ရင်သားကင်ဆာအတွက်သားအိမ်ဖိနှိပ်မှုနှင့်အတူ Adjuvant exemestane ။ ဆေးပညာ၏နယူးအင်္ဂလန်ဂျာနယ်, 371(2), 107-118 ။